रगतमा भएको भिटामिन ‘डी’को आधारमा मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सकिने ! – Sandesh Munch
रगतमा भएको भिटामिन ‘डी’को आधारमा मृत्युको भविष्यवाणी गर्न सकिने !
September 15, 2020 67
एजेन्सी । रगतमा रहेको भिटामिन ‘डी’ को तहका आधारमा स्वास्थ्यको भविष्यवाणी गर्न सकिने एक अध्ययनले निश्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनकर्ताहरुले भिटामिन ‘डी’ को आधारमा कुनै पनि प्राणीको मृत्युको पुर्वानुमान गर्न सकिने समेत दावी गरेका छन् ।
भिटामिन ‘डी’को अध्ययनले कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न र विवरणहरु पत्ता लगाउन पनि सघाउन पुर्याउने अध्ययनकर्ताहरुले बताएका छन् । बेल्जियमको फ्युनिभर्सिटी हस्पिटल्स लेउभेन’का डा. लिन एन्टोनिओको टोलीले भिटामिन ‘डी’ र स्वास्थ्यको पुर्वानुमानका बारेमा अध्ययन गरेको हो ।
अध्ययनमा ४० देखि ७९ बर्षसम्ममा मानिसहरुलाई समावेश गरिएको थियो । उनीहरु माथि सन् २००३ देखि २००५ सम्म अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनमा एक हजार ९७० जना संलग्न भएका थिए ।
अध्ययनको नेतृत्वकर्ता डा. एन्टोनिओले भने, “भिटामिन डिको अवस्थाको अध्ययनले तत्कालिन स्वास्थ्य अवस्थादेखि भविष्यमा आउनसक्ने स्वास्थ्य चुनौती र मृत्युसम्मको कुरालाई पनि पुर्वानुमान गर्न सक्ने देखिन्छ ।” उनको टोलीले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन हालै मात्रै तयार भएको हो ।
Prevविषाक्त यि स्यानीटाइजर प्रयोग नगर्नुस् [नामावली सहित]
Nextलोकप्रिय गायक तथा संगीतकार न्ह्यु ब्रजाचार्यको आज जन्मदिन
मान्छे मार्न बनाइएको कोरोना भाइरस यस्तो रहेछ हेर्नुहोस सबैलाई रुवाउने त्रसित कसरी भयो?
सबैले एक पल्ट पदनै पर्ने ‘मेरो पहिलो श्रीमानको मृत्युपछि म, मेरो छोरा र मेरो सपना सबैलाई उहाँले सहजै स्वीकार्नु भयो । र आजसम्म उहाँको साथ पाई रहेकी छु ।